XOG: Faah-faahin ku saabsan weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Xerada Hiilweyne & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
XOG: Faah-faahin ku saabsan weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Xerada Hiilweyne & Wararkii ugu dambeeyay
Balcad (Halqaran.com) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa weerarkii xooganaa ee Xoogaga Al Shabaab ku qaadeen Xerada Ciidanka Xoogga Dalka ku leeyihiin duleedka Degmada Balcad ee Hiilweyne.
Maleeshiyaadka Al Shabaab ayaa caweysnimadii xalay dhawr jiho ka weeraray Xerada Hiilweyne oo saldhig muhiim u ah Ciidanka Xoogga Dalka, kuwooda ka hawlgala Gobolka Shabellaha Dhexe.
Xoogaga Al Shabaab ayaa waxay qaybtooda u suurta-gashay in ay jiiraan difaacii hore ee Ciidanka Xoogga Dalka, ayna gudaha u galaan Xerada Hiilweyne, iyagoona kula dagaalamay Ciidamada Militariga.
Intii uu dagaalka socday ayaa waxaa la sheegay in Xoogaga Shabaabka ay dab qabadsiiyeen laba ka mid ah gaadiidka Ciidanka Xoogga Dalka, sidoo kalena uu dab ka kacay qaybo ka mid ah Xerada Hiilweyne. Ma cadda waxa dhaliyay dabka ka kacay gudaha xerada, balse waxaa jira warar sheegaya in uu ka dhashay hubkii dagaalka la isu adeegsanayay.
Wax badan lagama garanayo in Shabaabku ay gacanta ku wada dhigeen guud ahaan Xerada Hiilweyne iyo in kale, marka laga soo taggo in qaarkood ay gudaha xeradaasi kula dagaalameen Ciidanka Xoogga Dalka.
Wararka ayaa waxay sheegayan in askar ka tirsan kuwa Xoogga Dalka ay ku firxadeen dagaalka, isla-markaana ay u ruqaansadeen dhinaca Degmada Balcad. Balcad ayaa dhawr kiilo mitir (KM) u jirta Xerada Hiilweyne.
Isgaarsiinta goobta uu weerarka ka dhacay oo mid ciriiri ah ayaa keentay inaanan macluumaad faah faahsan laga helin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi, ha yeeshee waxaa la xaqiijiyay in dhimashadu ay tahay shan qof oo afar ka mida ay rayid yihiin. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira laba dumar ah iyo Kabtan Ciidanka Xoogga Dalka ka tirsanaa.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Shabaabkii gudaha u galay Xerada Hiilweyne ay muddo kooban ka dib ka baxeen xeradaasi, mana jirto wax saanad militari oo xeradaasi ay ka qaateen.
Dhanka kale Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee fariisimo ku leh hareeraha Degmada Balcad ayaa waxay iska diideen dalab uga yimid Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya, oo ku aadanaa in ay u gurmadaan Ciidanka Xoogga Dalka ee lagu weeraray Xerada Hiilweyne.
Warbaahinta Halqaran.com ayaa ogaatay in Amisom ay diidmadeeda ku macneysay xilliga oo habeen ah awgeed ay adag tahay inay gaarto Xerada Hiilweyne, iyagoo markaasi ka baqdin qaba in weerar dhaba gal ah ay kala kulmaan Shabaabka. Shabaabka ayaa sida looga bartay waxay wadada u galaan ciidamada u soo gurmada, ciidanka kale ee ay weerarka ku yihiin, waxaase suurtagal ah in Ciidanka Amisom ay saacadaha soo socda gurmad ugu dhaqaaqaan Hiilweyne.
Xaalad kacsanaan ah ayaa waxaa laga dareemaya Degmada Balcad iyo deegaanada kale ee hoos tagga, xaaladaasi oo ka dhalatay weerarka abaabulan ee mintidiinta Al Shabaab ku ekeeyeen Xerada Hiilweyne.
Waxaa la tilmaamaa in Hiilweyne ay muhiim u tahay difaaca Magaalada Muqdisho, marka ay noqoto dhinaca Gobolka Shabellaha Dhexe, waxaana taasi ka garan gartaa kormeerka ay dhawrkii biloodba mar ku taggaan Saraakiisha sar sare ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Sidoo kale Wasiirka Gaashaandhigga Somaliya, Xasan Cali Maxamed (Amar Dambe) ayaa dhawaan kormeer ku tagey xeradaasi, xilli uu u kuurgalaayay xaaladda Ciidanka Xoogga Dalka ee halkaasi degan.
Si kastaba ha’ahaatee, waa weerarkii ugu horeeyay oo ceynkiisa ah oo maleeshiyada Shabaabku ku qaadaan Dugsigii Tababarka ee Hiilweyne, tan iyo markii aaggaasi laga sifeeyay horaantii sanadkii 2012.
Al Shabaab oo weerar ku qaaday Xerada Hiilweyne ee degmada Balcad